စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator နှင့် hနှင့်wheel ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator နှင့် handwheel
3. Window: Polycarbonate င်းဒိုး built-in O-ကွင်း, fixed သတ္တုဂလင်း, အဂလင်းကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လွယ်ကူရေ, ကာကွယ်တားဆီးဖို့နှစ်ခုရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူကြွလာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ handwheel နှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator စက်တပ် 60,000 AOX-မေးစီးရီးတစ်ခုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများထုတ်ကုန်များ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာ။ AOX အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, ဖွထောကျ။
ပိုကောင်း handwheel နှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်အစိတ်အပိုင်းကိုအလှည့် actuator ဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှားအာရှအတွက်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
မေး: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကုန်ကျစရိတ်သည်အဘယ်အရာ handwheel နှင့်အတူ AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်အစိတ်အပိုင်းကိုအလှည့် actuator ရဲ့နမူနာအကြောင်း?
မေး: ငါတို့သည် handwheel နှင့်အတူ AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်အစိတ်အပိုင်းကိုအလှည့် actuator အကြောင်းပြောဆိုရန် skype ကအပေါ်ကိုပဌနာနိုင်သလား?
hot Tags:: စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator နှင့် handwheel, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်